Banijya News | सरकारले कुन सडक मार्ग निर्माणको लागि कति गर्यो बजेट बिनियोजन ? - Banijya News सरकारले कुन सडक मार्ग निर्माणको लागि कति गर्यो बजेट बिनियोजन ? - Banijya News
सरकारले कुन सडक मार्ग निर्माणको लागि कति गर्यो बजेट बिनियोजन ?
यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित विश्वसनीय र प्रविधियुक्त बनाइने भएको छ । बदलिँदो परिस्थितिमा सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । त्यसका लागि विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गरिनेछ । बिक्री दर्ता भएका सबै सवारीसाधनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी, पहिचानसहितको इम्बोस्ड नम्बर सबै प्रदेशबाट वितरण गरिने भएको छ । मालवाहक तथा अन्य सवारीसाधनमा जीपीएस सिस्टम जडान गरिनेछ ।
सार्वजनिक यातायातमा इटिकेटिङ लागू गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण गठन गरी सार्वजनिक परिवहन सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाइनेछ । यातायात सेवा सञ्चालनमा प्रतिस्पर्धा गरी यात्रुलाई सुविधायुक्त र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ ।
यातायात व्यवसायीको अचल सम्पत्ति रुपान्तरित यातायात कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । काठमाडौं उपत्यका, बिर्तामोड, इटहरी, भद्रपुर, ढल्केबर, जनकपुर, पोखरा, दमौली, बुटवल, लुम्बिनी, भैहरवा, कोहलपुर, नेपालगञ्ज, अत्तरीया, धनगढीलगायतका देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने भएको हो । त्यसो गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
साझा यातायातमार्फत सय विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन आगामी आवमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा ५ सय चार्जिङ स्टेसन, टर्मिनल भवनलगायत अन्य पूर्वाधार, निर्माण गरिने भएको छ ।
सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई तीव्ररुपमा ४ लेनमा विस्तार गर्ने भएको । त्यसका लागि १५ अर्व विनियोजन गरिएको छ । सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्ग २ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यस आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिईने योजना स्वरुप ९ अर्ब ८५ करोड छुट्याइएको छ ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आगामी वर्ष सुचारु गर्न ८ अर्व १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सिद्धर्थ राजमार्ग र कोहोलपुर सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लाइनमा विस्तार गर्नको लागि ७ अर्व विनियोजन गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको लागि ७ अर्व २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । अरनीको राजमार्गको लागि १ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उत्तर दक्षिण करिडोरलाई तीव्रता दिइने छ ।
आगामी आवमा सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा दोभान खण्ड, दोलखाको लामाबगर, धरान धनकुटा सडकखण्डको धरान लेउती सुरुङमार्ग प्रारम्भ गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिने छ । पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गरिने भएको छ । राजमार्गको दुरी घटाउन सुरुङमार्ग हाईब्रिजको प्रयोग गरिने छ । त्यसको लागि ८ अर्व १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मदन भण्डारी मार्गका लागि ३ अर्व २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माण ६ अर्व ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ। आबुखैरेनी पोखरा खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न ७ अर्व २७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।